अमेरिका सम्म पुग्ने गोप्य सुरुङ्ग बनाएको खुल्यो [८ तस्वीर] - Nepal Insider
Home/समाचार/अमेरिका सम्म पुग्ने गोप्य सुरुङ्ग बनाएको खुल्यो [८ तस्वीर]
वासिङ्गटन । अमेरिकी अधिकारीहरूले एरिजोना राज्य अन्तर्गत मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमामा एउटा गोप्य सुरुङ पत्ता लगाएको छ । ६ सय फीट लामो उक्त सुरुङ एउटा रेस्टुरेन्टबाट सुरु भएर मेक्सिकोमा खुल्ने गर्दछ । प्रहरीका अनुसार यस गोप्य सुरुङ मार्गलाई तस्करी गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको थियो ।
प्रहरीले केही दिन अगाडि एउटा ट्रकमा ठुलो मात्रामा मे’थाम्फे’टामा’इन, को’कीन, हे’रो’इन र फे’न्टा’नाइल जस्ता ला’गु प’दार्थ पक्राउ परेपछि उक्त ट्रक, रेस्टुरेन्ट र उक्त भवनका मालिक इभान लोपेजलाई गि’रफ्तार गरिएपछि यस कुराको पत्ता लागेको छ ।
हाल बन्द रहेको उक्त केएफसी रेस्टुरेन्ट मेक्सिको र अमेरिकी सीमाबाट लगभग १८० मिटरको दूरीमा सान जोस सहरमा रहेको बताइएको छ । अमेरिकामा पटक-पटक यस्ता भू’मिगत सुरुङ भेटिनुले सुरक्षा चासो बढेको बताइएको छ । दुई वर्षअगाडि क्यालिफोर्निया राज्यको सान डिएगो सहरमा यस्तै प्रकारको २ हजार ६ सय फीट लामो सुरुङ पत्ता लागेको थियो । यसलाई पनि ला’गु-औ’षध त’स्करीका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको बताइएको छ । गत जुलाइमा मात्रै सीमा सुरक्षा दलले १५ किलोग्राम हे’रोइ’न, ३ सय २७ किलो मे’था’मफे’टामाइन एक हजार ९ सय किलो म’रिजु’आना बरामद गरेको थियो ।
मलेसियामा रवि लामिछाने समर्थकहरु
दक्षिण कोरियन बाहेक सबै देशको मूल्य बढ्यो , हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
सानो गल्ती गरेपनी खेदो खन्ने लामिछाने : ससुराको ओम अस्पतालले मान्छे मा*र्दा किन चुपचाप ?
प्रियंका कार्की र श्रीस्टी श्रेष्ठ को रोमानंस, फिल्म छाडेर वेव सिरिज खेल्दै